Homeसमाचारअन्तिप पटक छोरी भागिरथीले बोलेको त्यो शब्द, बाटो हेरेर आँखाहरु थाके तर छोरी फ’र्किनन् (भिडियो सहित)
February 10, 2021 admin समाचार 6951
घरको दैलोमा बस्दै बाटोतिर एको’होरो हेरी रहेकी यी आमा । जस्को ओँठमुख सबै सुकेका छन् । यिनलाई न दिनको भोक छ न त रातको निंद नै छ । छ त केवल आफ्नै जिन्दगीको सहनै नस’क्ने पि’डा । यिनी हुन् स्कूलबाट अहिलेकी चर्चित दुखद घ’टनाकी पात्र भागरथीकी आमा । जस्को आखाँबाट बर्रर आँशु झरि रहेको छ तर पु’च्छ्ने हेक्का भने छैन ।
पि’डामाथि पि’डा सहुन् पनि कसरी ? श्रीमानको मृ’त्यु भएको २ महिना पनि पुरा भएको थिएन । फेरी जवान र होनहार छोरी गईन् अल्प’आयुमै । यी एकल आमाको काख र कोखबाट खोसिदिए पापीहरुले । सन्तानलाई सानो चो’ट मात्रै लाग्दा त त्यसको दुखाई आमाबुवालाई हुन्छ भने भागरथी त अ’काल्मै यो संसारबाटै आफ्नी आमालाई सदाका’लागी छा’डेर गएकी छन् ।
छोरी अब यो संसारमा कहिल्यै नर्फ’कने गरी गएको खबरले यी आमाको मन दुखेको छ होला ? कति छ’टपटि’एको छ होला ? यो कुराको अनु’भुति केवल उनैले मात्र गर्न सकेकी छन् । छोरी अझैंपनि कतैबाट आमाभन्दै बोलाउँदै आउँछे कि भन्ने उनलाई कति लागेको हुँदो हो । तर अब त्यो कहाँ सम्भ’व छ र ? दैव पनि कति निष्ठुरी हुँदा रहेछन् भन्ने भनाई यतिबेला भागरथीकी आमाको जीव’नमा लागु भई दिएको छ ।
बहीनी भागरथीलाई स’म्झंदै रसाएका दाईका आखाँले बहीनी गुमा’उँदा उनको मनमा फु’टेको ज्वारभाटालाई प्रष्ट देखाउँछ । बुवाको नि’धनपछि घरको जिम्मेवारी उनीमाथी आई लागेको हुनाले काम गर्न र आर्थिक कुरालाई माथि उठाउन उनी भारत गएका थिए । जब बहीनी भागरथीको बारेमा उनले थाहा पाए तब उनी भारतबाट घरमा आएका छन् । बहीनीलाई सम्झिं’दै उनी भन्छन्,‘म हिंड्ने बेला मैले बहीनीलाई भनेको थिएँ । बुवापनि हुनुहुन्न । मपनि इण्डिया कमाउन जाँदैछुु ।
आमाको र आफ्नो ख्याल राख्नु र राम्रोसंग पढ्नु ।’ बहीनीसंग भएको यही सम्बादलाई स’म्झिंदै भक्का’निए भाथरथीका दाई । आमाको साहारा नै तिमी हौ भन्दै आमालाई बहीनीको जिम्मा लागएका दाईले जब यो कुरा अर्काको देशमा काम गर्दै गर्दा थाहा पाए तब उनीमाथि के बितेको थियो होला त्यो कसैले मह’सुस सम्म गर्न सक्दैन । – इताजा खबरबाट
February 22, 2021 admin समाचार 7032
March 25, 2021 admin समाचार 5458
February 9, 2021 admin समाचार 6693